Aghụghọ isii iji nweta uru nke Instagram na gam akporo | Gam akporosis
Edere Ferreno | | Ngwa gam akporo, Gam akporo Ndị aghụghọ, Nkuzi
Instagram abụrụla otu netwọkụ mmekọrịta kacha ewu ewu Gburugburu ụwa. Na mgbakwunye, n'ime ọnwa ndị na-adịbeghị anya ọ ka mma na nnabata ọtụtụ ọrụ ọhụrụ. Ekele ha, ọ bụrụla nhọrọ zuru oke. Mana nke bụ eziokwu bụ na enwere ọtụtụ aghụghọ iji nweta ọtụtụ ihe na akaụntụ gị na netwọkụ mmekọrịta ama ama.
Mgbe ahụ, anyị hapụrụ gị usoro nke aghụghọ iji nweta ọtụtụ uru na ya na akaụntụ gị na Instagram. N'ụzọ dị otú a, ị ga-enwe ike iji ọtụtụ ọrụ mmekọrịta mmekọrịta na-enye gị taa. Njikere ịmụta ihe ndị a na-eji aghụghọ?
1 Zoo posts
2 Nweta ndekọ ego gị
3 Soro hashtags
4 Lelee oge ojiji
5 Chekwaa foto na drafts
6 Ichekwa data
N'oge ụfọdụ, mgbe ị banyere profaịlụ nke Instagram gị, ị nwere ike ịhụ foto na-adịghị amasị gị, ma ọ bụ na ị chere na ọ dabara adaba na profaịlụ gị. Mana, ị chọghị ihichapụ ya, n’ihi na ọ bụkwa ebe nchekwa. N'echiche a, ngwa ahụ webatara ohere nke Archive dị otú ahụ posts. N'ụzọ dị otú a, e kwuru na ọdịnaya zoro ezo site na ndị ọrụ ndị ọzọ, mana ị ga-enwe ike ịhụ ya ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịme ya.
Tozọ isi mee nke a dị mfe. Ikwesiri ịbanye profaịlụ gị yana mbipụta ahụ dị na ajụjụ. Mgbe ahụ, n'ime ya, pịa ebe atọ kwụ ọtọ n'ime ya. Otu n'ime nhọrọ ga-apụta bụ na-Archive. Wee pịa ya, ndị ọrụ agaghị enwe ike ịhụ akwụkwọ a na netwọkụ mmekọrịta.
Nweta ndekọ ego gị
Nchịkọta ọnụ ọgụgụ na Instagram nwere ike ịmasị ndị mmadụ nwere ọtụtụ ndị na-eso ụzọ ma ọ bụ maka ụlọ ọrụ. N'ụzọ dị otu a, ị ga-enweta ntakịrị ihe ọmụma zuru oke gbasara ndị na-eso ụzọ gị. Ga-ama obodo ha si, ma ọ bụrụ na e nwere ọtụtụ ụmụ nwoke ma ọ bụ nwanyị, wdg. Site na nke a, ị ga-enwe ike ịme ka mbipụta gị bụrụ nke ndị na-eso ụzọ na-amasị. Mana, iji nweta ọnụ ọgụgụ ndị a, ị ga-enwe akaụntụ azụmahịa.
Ọ bụrụ na ịchọrọ nwee akaụntụ azụmahịa na Instagram, iji nweta ọnụ ọgụgụ ndị a, akọwapụtara usoro ị ga - agbaso N'isiokwu a. Ebe ị ga-ahụ usoro niile ị ga - eso. Ọ dị mfe.
Otu ọrụ a webatara na afọ a na ngwa ahụ bụ ohere soro hashtags. Dịka anyị nwere ike ịgbaso akụkọ ndị ọzọ, Instagram na-enye anyị ohere ịgbaso hashtags. Ihe nwere ike ikwe ka anyị gaa na nke ọ bụla masịrị anyị. Kedụ ka anyị ga - esi agbaso hashtag na ngwa ahụ? Ọ dị mfe ịnweta.
Gaa na ọchụchọ maka ngalaba ọdịnaya, site na ịpị akara ngosi iko na-egosi na ala nke ngwa ahụ. N'elu ihuenyo ka ị ga-eme ya lee akara ngosi hashtag #. Pịa na ya ma ị ga-enweta aro nke hashtags ị nwere ike ịgbaso. Ọ bụrụ na ịchọrọ, ị nwere ike ịchọ otu. Mgbe ahụ, pịa hashtag kwuru na ị ga-enweta bọtịnụ ịpị.
Lelee oge ojiji
Otu n’ime njirimara kachasị ọhụụ kụrụ Instagram bụ nke ahụ na-enye gị ohere ịlele otu ị si eji ngwa ahụ. Ọ na-eme ka ị mara oge ị na-eji kwa ụbọchị iji ngwa na ekwentị gam akporo gị. Yabụ, ị ga - ahụ ma ị na - eji ya eme ihe, ma ọ bụ ikekwe ị ga - eji ya obere obere oge. Tozọ lelee ya dị mfe.
Dika anyi gwara gi na ubochi ya, ị ga-aga profaịlụ gị na netwọkụ mmekọrịta. Wee pịa n'elu atọ atọ kwụ atọ. Optionsfọdụ nhọrọ ga-apụta n'akụkụ aka nri, nke mbụ bụ ọrụ m. Tinye ngalaba a. N'ebe a ị ga-enwe ike ịhụ oge ị na-etinye kwa ụbọchị na Instagram. Ọ bụrụ n'ịchọrọ, ị nwedịrị ike ịhazi oge ncheta, ka iji ya mee ihe nke ọma.
Chekwaa foto na drafts
Nwere ike ịnwe ọkwa iji kwalite, ma na oge ikpeazu igbanwe obi gi. Maghị ma ị ga-ebugo ya. Hapụ foto a bụ ihe anyị na-agaghị eme, ọkachasị ma ọ bụrụ na anyị edezi ya obere oge. Ọ dabara nke ọma, Instagram na-enye anyị ohere ịhapụ ida ọrụ a anyị rụzuru.
N'ime nhọrọ ntinye nke foto a, anyị ga-pịa bọtịnụ nke na-enye ohere ịlaghachi na mbipụta a. Mgbe ị mere nke a, ozi "Chekwa na drafts?" Ga-egosi na ihuenyo. Anyị kwesịrị ịnakwere. Echekwara post a na drafts. Ọ bụrụ na anyị gbanwee obi anyị n’oge ụfọdụ, anyị nwere ike ịga draịva ndị a na Instagram ma bulite foto ahụ.
Ọtụtụ ngwa ọdịnala ewebata data echekwara, nke na-enye anyị ohere belata oriri data na ha. Instagram bụ otu n'ime ha, yabụ mgbe anyị jiri ngwa ahụ na gam akporo, oriri ga-adị ala karịa ka ọ ga-adị. Ke ibuotikọ emi Anyị akọwaala otu a ga-esi mee ya.
Naanị ị ga-abanye ntọala ngwa ma chọọ maka ojiji ojiji data mkpanaka. N'ime ya, ịnwere ike ịgbalite data echekwara na Instagram n'ụzọ dị mfe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Aghụghọ iji nweta ihe na Instagram
Ngwa kacha mma na-egbochi ohi maka gam akporo
N'ihe banyere teas ndị ọrụ nke Lenovo Z5s, ọkọlọtọ na-esote